Udluliselwa Phambili Umdlalo weHighlanders leFC Platinum
Nhlolanja 24, 2017
Iqembu le Highlanders bekumele lingqikilane lele FC Platinum kumdlalo wesigaba sama semi-final kunkezo ye Commander Zimbabwe National Army Charities ngeSonto enkundleni ye Barbourfields kodwa lumdlalo udluliselwe phambili ngemva kokuba kunanzelelwe ukuba isimo senkundla asilunganga njengoba kugcwele amanzi yonke indawo.
Umbiko othunyelwe onozindaba yisikhulumeli sebutho uLieutenant Brian Muchero, uthi iqembu le Highlanders lele FC Platinum asezadibana ngenyanga ezayo mhla zilitshumi lambili khona njalo enkundleni ye Barbourfields.
Kusenjalo, umdlalo ofanayo ohlelwe ukuba udlalwe phakathi kweqembu le Dynamos lele Caps United wona uzaqhubekela phambili enkundleni ye National Sports Stadium ngeSonto.
Iqembu elizanqoba phakathi kwele Dynamos lele Caps United lizalinda elizaphumelela phakathi kwe Highlanders le FC Platinum sekudingwa intshantshu zalonyaka. Nyakenye iqembu le Highlanders yilo elaphakamisa inkezo ngemva kokunqoba ele Harare City.
Ukungadlalwa komdlalo obekumele ube phakathi kwe Highlanders le FC Platinum sekudale ukuba usuku obelubekwe ukuba yikho lapho okuzadlalwa khona ifinal eyomncintiswano walonyaka owenkezo ye Commanders ZNA Charities lalo ludluliselwe phambili.
Aluba yonke into ibihambe ngemfanelo ifinal yalonyaka bekumele idlalwe mhla zinhlanu ngenyanga kaMbimbitho kodwa isizakuba khona mhla zingamatshumi amabili lesithupha ngenyanga kaMbimbitho.
Iqembu elizaphakamisa inkezo lonyaka lizathola inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola aseMelika kuthi elizadliwa kufinal lizathola inkulungwane eziyithoba minwe mbili.
Izulu lina kakhulu esigabeni semaNdebeleni kulezinsuku njalo ensukwini ezedluleyo liphazamise umdlalo wokuzwana amandla obuphakathi kweqembu le Highlanders lele Bulawayo City wona ongasafikanga emaphethelweni.
Umncintiswano we Commanders ZNA Charities Soccer Shield uyingxenye yemizamo yebutho lelizwe le Zimbabwe eyokuphathisa abafelokazi kanye lentandane zamalunga abo asadlula emhlabeni ngosekelo lwemali.